जमिनको मनमौजी मूल्य, काठमाडाैं संसारकै छैटाैं महँगाे - IAUA
ramkrishna November 1, 2016	काठमाडाैं संसारकै छैटाैं महँगाेजमिनको मनमौजी मूल्य
न्युयाेर्क, सिड्नी, पेरिस, मस्काे र सांघार्इभन्दा चर्काे मूल्य
उत्पादनको साधन हुनुपर्ने जग्गा सट्टेबाजीको सिकार बनाइएपछि सहरी क्षेत्रको जग्गाको मूल्यले आकाश छुँदैछ ।
काठमाडौंको दरबारमार्गमा आनाको ८ करोडसम्म भन्न थालिएको छ । यो मूल्यअनुसार दरबारमार्गमा भन्दा संसारकै
सर्वाधिक महँगा स्थानहरुमा दरिएका अमेरिको न्युयोर्क, अष्ट्रेलियाको सिड्नी, फ्रान्सको पेरिस, रुसको मस्को र चीनको
काठमाडौंको केशरमहलद्वारदेखि पश्चिम ठमेल मूल चोक हुँदै क्षेत्रपाटीचोकसम्म, हनुमानढोका जिल्ला प्रहरी कार्यालयपूर्व, सुरज आर्केड, इन्द्रचोक, असन हुँदै भोटाहिटी चोक, जमल राष्ट्रिय नाचघरदेखि पूर्व विश्वज्योति हल, तीनधारा पाठशाला, महेन्द्र सालिकदेखि काठमाडौं प्लाजा, माइतीघर सिंहदरबार पश्चिम गेट, पुतली सडक, कृष्ण पाउरोटी हात्तीसार, जयनेपाल, दरबारमार्ग, कमलादी, सुन्धारा, न्युरोड, त्रिपुरेश्वरसम्मको मूल सडकमा जोडिएको जग्गाको मूल्य सरकारले प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ । तर, यो क्षेत्रमा प्रतिआना जग्गा रु. १ करोडभन्दा कममा पाइँदैन । यस्त,ै बागबजार, पूरानो बसपार्क, पद्मोदय मोडदेखि सभागृह चोकसम्मको मूलबाटोमा जोडिएको जग्गाको मूल्य प्रतिआना ३६ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । न्युरोड गेटलेखि महाबौद्ध ओटुमार्ग, रञ्जना मल, फसिकेब वरपरको मूल्य आनाको ३२, लैनचौर चोकदेखि पानीपोखरी, टिचिङ हुँदै नारायण गोपाल चोकसम्म मूलबाटोमा जोडिएका जग्गा प्रतिआना ३० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सरकारले सबैभन्दा कम मूल्य चाबहिल मालपोत कार्यालयअन्तर्गतको नाङ्लेभारेमा सडक नभएको जग्गालाई प्रतिआना ७ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
काठमाडौंको चाबहिलस्थित एउटै मालपोत कार्यालयले वर्षमा झन्डै ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको पाइएको हुँदा देशभरको कारोबारलाई हेर्ने हो भने जग्गा किनबेचबाट हुने राजस्व संकलनमा सरकारले बर्सेनि अर्बाैं रुपैयाँ गुमाइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढीमा कारोबार भइरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीहरूलाई नभएको होइन । बढी मूल्यमा कारोबार गरेर कम मूल्यमा कारोबार भएको देखाएर राजस्व छल्ने प्रवृत्तिप्रति पनि उनीहरू जानकार छन् । काठमाडौं डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘रु. ७० लाख प्रतिआनामा कारोबार भएको जग्गा ३० लाखमा कारोबार भएको देखाएर मालपोत पास गरिन्छ ।’ वास्तविक कारोबार मूल्य नै राखेर जग्गा पास गर्नेहरू पनि भए पनि तिनीहरूको संख्या अत्यन्तै कम हुने उनले बताए । प्रायः कारोबारीले वास्तविकभन्दा धेरै कम मूल्यमा कारोबार भएको देखाउने गरेका छन् । सम्पत्तिको मूल्यांकन पनि निकायपिच्छे फरक फरक हुने कारणले त्यसो भएको ती अधिकारीको दाबी छ । एउटै सम्पत्तिको मूल्यांकन मातपोत, नगरपालिका र बैंकको फरक फरक हुन्छ । यसले गर्दा सरकारले चौतर्फी रूपमा राजस्व गुमाइरहेको छ ।
घरजग्गाको कारोबार गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यांकनका आधारमा जग्गा पास गर्ने प्रवृत्तिबाट राज्यले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाइरहेको छ । वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम रहेको सरकारी दरका आधारमा जग्गा बेच्ने र किन्ने पक्षले मालपोतमा जग्गा पास गराउँदा यस्तो नोक्सानी भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन र सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा उपलब्ध गराउने मुआब्जाको रकम एउटै हुने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरिएको भए पनि हालसम्म त्यो कानुन पारित हुन सकेको छैन ।
जग्गा बिक्री गर्दा कम मूल्य देखाएर राजस्व छलेका एक दर्जनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग खेपिरहेका छन् । कम मूल्यमा जग्गा किनबेच गरेको देखाएर रजिस्ट्रेसन पास गरे पनि खातामा बढी रकम हुनेलाई शंकास्पद ठह¥याउँदै अनुसन्धानमा तानिने गरेको छ । मालपोतका लेखनदास र कर्मचारीले नै सरकारी मूल्यांकन अनुसारको दरमा मात्र कारोबार भएको देखाउन सुझाव दिने गरेको यस्तै अभियोग लागेका एक जग्गा कारोबारीले बताए । जग्गा किनबेच गर्ने ९० प्रतिशतले न्यून मूल्य देखाएर कारोबार गर्ने गरेका छन् ।
विश्वका धेरैजसो देशमा सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने छुट्टै निकाय हुन्छ । नेपालमा पनि सम्पत्तिको मूल्यांकनका लागि अलग्गै निकाय हुन जरुरी भए पनि हालसम्म यस्तो व्यवस्थित योजना र पद्धति छैन । सम्बन्धित जिल्लाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको संयन्त्रलाई सम्पत्तिको मूल्यांकन तोक्ने अधिकार भए पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष देशभरि सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दै त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने संयन्त्र आवश्यक भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । वैज्ञानिक आधारमा मूल्यांकन गर्ने पद्धति बसाउन सके जग्गाको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि थामिने उनको विश्वास छ । यसको संयन्त्रले स्थान विशेषमा जग्गाको प्रयोजन र उपयोग तोकेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कुन जग्गा के कामका लागि तोकिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । सम्पत्तिको अवस्था, गुणस्तर, सेवा सुविधा, सहरी वा अन्य पूर्वाधार सुविधा, आम्दानीको अवसर वा विकल्पहरू, प्रतिफल आदि हेरेर वार्षिक त्यसको म्ूल्यांकन गरिनु आवश्यक हुन्छ । सम्बन्धित सम्पत्ति धनीले उक्त निकायबाट आफ्नो सम्पत्तिको मूल्यांकन प्रमाणपत्र लिन सक्नेछ भने सोही एउटा प्रमाणपत्र मालपोत, नगरपालिका र बैंक प्रयोजन आदि सबैमा मान्य हुनेछ । यसो गर्दा एकातिर सरकारले राजस्व गुमाउनुपर्दैन भने अन्य सरोकारवाला निकायपिच्छे मूल्यांकन गर्ने÷गराउने झन्झट रहँदैन ।
त्यसैले मूल्य निर्धारणमा प्रभाव पार्न सरकार सक्षम हुनुपर्छ । जग्गाको मूल्यलाई वैज्ञानिक बनाउन सरकारले उच्चस्तरीय मूल्यांकन ‘आयोग’ नै बनाउनुपर्छ । उक्त आयोगले हरेक वर्ष मुलुकभरिको जग्गाको मूल्य तोकिदिनुपर्छ । हाल मालपोतले गर्दै आएको मूल्य निर्धारण त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो कहिलेकाहीं बजार मूल्यभन्दा पनि माथि जान सक्छ । तर व्यवहारमा मूल्य बजारको भन्दा बढी हुनुहँुदैन । बजार मूल्यको नजिक–नजिक पुगेर नियमित रूपमा समायोजन गर्नुपर्दछ ।
मनमौजी मूल्यले विकास प्रभावित
जग्गा मूलतः उत्पादनको साधन भए पनि मनमौजी र मनोमानी मूल्य तोक्ने प्रवृत्ति छ । जग्गाको मूल्यका कारण मुआब्जा विवादले धेरै विकास निर्माणका परियोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जग्गाधनीले आफूखुसी जग्गाको मूल्य तोक्दै मनलाग्दी मुआब्जा मागगरेपछि ठूला परियोजनाहरूको निर्माण रोकिँदै आएका छन् । ढल्केवर–मुजफ्रपुर प्रसारण लाइन अन्तर्गत सिन्धुलीमा जग्गाको लाखौं क्षतिपूर्ति माग्दै स्थानीयले अवरोध गरेपछि यो आयोजना वर्षौं अवरुद्ध भयो । पूर्वपश्चिम रेलमार्गदेखि जलविद्युत् परियोजना सबैतिर यस्तो दुरवस्था प्रायः सबै परियोजनाले भोगेका छन् । जग्गा अधिग्रहणकै समस्या कारण ठूला परियोजनाहरू अड्किने गरेका छन् । कुनै स्थानमा परियोजना निर्माण सुरु हुने चर्चा चल्ने बित्तिकै जग्गाको मूल्य एकाएक बढ्ने र बिना औचित्य ठूलो नाफा राखेर कारोबार हुने प्रवृत्ति सामान्य भइसकेको छ ।
भविष्यमा विकास निर्माणको काम होला र मुआब्जा कसौंला भनेर जग्गा ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय चलाउँछु भन्दै हजारौं हेक्टर जमिन भाडामा वा किनेर आधिपत्य जमाइरहेका छन् । डाँडाकाँडा नै ओगटेर बस्नेहरू समेत छन् । व्यक्तिले यसरी हजारौंं हेक्टर ओगटेर बस्ने हो भने सरकारले विकास निर्माणका काम गर्न, मुआब्जा बेहोर्न कठिन पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले संविधानमा नै प्राकृतिक सम्पत्तिमा राज्यको सर्वोपरि अधिकार रहने व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्ने पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाको भनाइ छ । तर, जग्गामा अधिकार खोस्नु स्वतन्त्रता र उदारवादको विपरीत हुने तर्क पनि छँदैछ ।
जग्गाको अधिकार सरकारसँग भयो भने कम आय हुनेका लागि ‘अफोर्डेबल हाउजिङ’ विकास गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । जग्गाको मूल्य अधिक हुँदा कुनै पनि डेभलपरले सस्तोमा घर बनाएर दिन समेत सक्दैनन् । उनीहरूलाई सरकारले जग्गा भाडामा वा ल्यान्ड पुलिङ मार्फत दिने हो भने ‘लो कस्ट हाउजिङ’ बनाउन सकिने सम्भावना हुन्छ । पूर्वगभर्नर खतिवडा जमिन भनेको किनबेच गर्ने वस्तु नै नभएको र यसलाई राज्यको स्वामित्वमा राख्नुपर्ने प्राकृतिक सम्पत्ति भएको बताउँछन् । जमिनमा भोगाधिकार मात्र नागरिकको बनाउनुपर्ने उनको विचार छ । राज्यले जनतालाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर चाहिएको बेला जग्गा वैकल्पिक उपयोगमा ल्याउन सक्ने बनाउनुपर्ने उनी तर्क गर्छन् ।
propertytoday.com.np April 19, 2015
Previous Previous post: काठमाडौंमा १ लाख बढी घरजग्गा किनबेच: आनाको साढे ४ लाख सम्म मुल्याङ्कन भएका जग्गा धेरै बिके
Next Next post: ​अब काठमाडौंमा घर बनाउँदा कुन नदीको दायाँबायाँ कति जग्गा छाड्नुपर्छ ?